Lalao Baby Hazel: dokoteram-biby aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Baby Hazel: dokoteram-biby an-tserasera
My Cat Pets Kitty Cat
Ny Petoo Virtual ahy
Cutie ny Kitty Rescue
Lalao Online Games ho an'ny ankizivavy Simulations ho an'ny ankizivavy Pets Dokotera Fikarakarana ny biby Baby Hazel Ny Fanabeazana Efijery kasihina Html5 Android
Baby Hazel mianatra tsy tapaka avy amin'ny taranja sasany sy ny amin'izao fotoana izao izany mifarana ornithological ny antokony avy, araka izay afaka mitondra mora foana ny vorona sy ny lehibe sy ny kely. Satria fantatrareo fa ny zazavavy vet - dia mandefa fiainana rehetra avy amin'ny manodidina rehetra. Kosa, dia handray anjara amin'ny lalao mahafinaritra ity sy hanampy ny zazavavy kely Hazel hiatrehana ny asa. Voalohany ao amin'ny andalana boloky. Ataovy ny zaza eo amin'ny perch ary manomboka midikiditra amin'ny fiainany momba ny fahasalamana ny faharetana. Rehefa avy famolavolana ny aretiny ilay dokotera afaka mandeha amin'ny fitsaboana.